Glucometers-yada ugu fiican Hindiya 2021 - ALinks
Maalmahan tirada cudurada ayaa marba marka ka dambeysa sii kordheysa. Sonkorowgu waa mid ka mid ah cudurada ugu caansan. Cudurka macaanku sidoo kale si aad ah ayuu ugu soo badanayaa wadankeena kiisaskiisana waxaa la arkaa koror sanad kasta. In kasta oo kor u kacani uu kordhay dhawrkii sano ee la soo dhaafay oo keliya. Halka cudurka macaanku uu yahay hal xaalad oo aan ilaa iyo haatan lahayn wax daawo ah. Waxaa lagu maareyn karaa ilaa xad kaliya dawada saxda ah iyo nafaqada. In kasta oo aad u baahan tahay inaad kala socoto heerka sonkorta dhiiggaaga maalin kasta. Tani waxay noqoneysaa mid aad muhiim u ah markaad jirro sida sonkorowga oo kale mararka qaarkood waxaad ubaahantahay inaad lasocoto cuntada kadib ama kudhowaad 4-5 jeer maalintii. Iyo, inta badan dadka ku nool Hindiya ma awoodaan biilasha cusbitaalka ee qaaliga ah. Waqtigaani waa waqtiga ay glucometers u adeegaan ujeedo weyn noloshaada oo ay kaa badbaadin karaan waxyaabo badan.
Casrigan casriga ah ee teknolojiyadda, kuwani waxay noqdeen kuwa si aad ah u fududahay in la isticmaalo. Waxaa jira in badan oo glucometers ah oo laga heli karo suuqa maalmahan. Waxaan diyaarinay liis ay ku qoran yihiin qaar ka mid ah qalabka ugu wanaagsan ee la heli karo. Fadlan fiiri
Qaar ka mid ah Glucometereyaasha Sare
Dr. Morepen GlucoOne Model Glucose Monitor Model BG 03
Saxnimadiisa iyo qiimaheeda oo hooseeya awgeed, glucometer-kan uu sameeyay Dr Morepen ayaa caan ku ah suuqa Hindiya. Si loo qiimeeyo heerka sonkorta, kaliya 0.5L oo dhiig ah ayaa loo baahan yahay. Glucometer-ku waa sax oo si khaldan ayaa loo sameeyay si uu ugu raaxaysto gacantaada. Qalabkeeda qaylo-dhaanta beeper wuxuu kuu oggolaanayaa inaad si fudud u hubiso akhriska xilliga ku habboon. Qalabka dhejiska, qalabka feeraha, 10 xarigood, baytariyada, iyo kiish caag ah ayaa dhammaantood ku jira xirmada oo dhan. Tirada xargaha tijaabada ee ku jira xirmadaan waxaa go'aaminaya isku darka aad dooratay.
Iibso @ Amazon
Accu-Chek Qalabka Mitolojiga Dhiigga Firfircoon ee Firfircoon
Heerkulbeegtani 'Accu-check' waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican suuqa. Accu-Check waa magac caan ku ah noocyada kala duwan ee kormeerayaasha caafimaadka. Heerkulbeegtani waa mid aad u sax ah waxayna ku bixisaa natiijada kaliya 5 ilbidhiqsi. Waxaa jira qaabab kala duwan oo lagu heli karo glucometer-ka sida soonka, calaamadaha ka hor iyo ka dib cuntada oo kaa caawinaya inaad la socoto heerarka sonkorta dhiiggaaga. Waxay sidoo kale kuu ogolaaneysaa inaad aqriso akhrintaadii hore. Waxay sidoo kale la socotaa 8 ilbiriqsi oo xulasho dib-u-qaadasho ah. Astaantan, waxaad heleysaa xoogaa waqti dheeri ah (qiyaastii 10 sekan) haddii ay dhacdo inaad codsatay qadar dhiig oo kugu filan si aad ugu dalbatid qaddarka dhiigga ee ku habboon xariijimaha si aad u hesho akhriska saxda ah. Sidoo kale, waad ku xidhi kartaa laptop-ka oo aad kala soo bixi kartaa warbixintaada oo aad ku haysan kartaa mustaqbalkaaga.
BeatO Smart Glucometer Qalabka
Kormeerahan caanka ah ee sokorta dhiiga Beato la mid maaha kuwa kor lagu sharaxay. Kani waa qalab yar oo isku xira si dhib la’aan ah taleefankaaga casriga ah. Intaa ka dib, waa inaad gelisaa xariga oo aad aqrisaa. Way yar tahay, natiijaduna waxay ka muuqataa taleefankaaga casriga ah. Way fududahay in lala socdo akhriskaaga hadda wax walboo taleefankaaga ayey ku jiraan. Waxaa sidoo kale lagugula talin doonaa nooca cunto ee aad raaceyso haddii aqrintu aysan fiicneyn, taasoo ka dhigeysa qalab aad u fiican in la isticmaalo.
kormeeraha sonkorta dhiiggaGlucometers-ka HindiyaHeerka sonkorta
Fiisaha Maldives ee Hindida
Bariiska ugu fiican uk
ugu fiican mootada robot amazon